MODA | Article Detail | အသက်ရှိနေတဲ့ အရုပ်မလေး LULU HASHIMOTO
ကြောက်စရာကောင်းလား၊ Kawaii လား
ဂျပန်နိုင်ငံက အရုပ်မဆိုတာနဲ့ တစ်မျိူးတော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ ဒီအရုပ်မလေးကတော့ Fashion ကျပြီး လူတိုင်းရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လူငယ် Designer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hitomi Komaku က နာမည်ကျော် Lulu Hashimoto ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းတွေ၊ မွေးနေ့တွေမှာသာ မြင်ရတဲ့ Cartoon Character ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး ဖျော်ဖြေတဲ့ အရုပ်လေးတွေကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီအရုပ်တွေကို Kigurumi လို ဂျပန်လို့ခေါ်ကြပြီး ဒီလို လူမျက်နှာမပြတဲ့ပုံစံကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Harajuku ရဲ့ လမ်းမထက်မှာ သူမကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်း Fashion ချစ်သူတွေကြားမှာ အရှုးအမူးဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ Vintage ဆန်ဆန် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ အာရှတိုက်မှာ ခေတ်စားတဲ့ Superdollfie နဲ့ တစ်ပုံစံတည်းမို့ အားလုံးအတွက် အားကျစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ကနာမည်ကြီး Fashion Magazie တွေကပါ သူမကို ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး Photo Model အဖြစ်နဲ့ကော Commercial တွေကိုပါ လက်ခံရိုက်ကူးလာရပါတယ်။
သူမက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး သက်ရှိအရုပ် Fashion Model လေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်အရုပ်မလေးတစ်ရုပ် အသက်ဝင်နေသလို ဖြစ်နေတာမို့ Lulu ကို ဘယ်သူက စိတ်မဝင်စားပဲနေနိုင်မှာလဲ။ တစ်ကိုယ်လုံးကို အရုပ်မလေးအသွင်ဖြစ်စေဖို့ ဆံပင်တုတွေ၊ မျက်နှာဖုံးနဲ့ လက်အိတ်ခြေအိတ်တွေဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။
အရုပ်ကလေးရဲ့ ခြေဆစ်၊ လက်ဆစ်အတိုင်း အသားကပ်တွေကို သေချာ Design လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း သက်ရှိအရုပ်မလေးတစ်ယောက် လှုပ်ရှားနေသလို ရုပ်လုံးကြွနေတာပါ။
သူမကို ပုံဖော်သူဖြစ်တဲ့ Designer Hitomi က သူမရဲ့ အရုပ်မလေးကို လူတွေက လိင်ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ဆိုပြီး ဝေဖန်ကြပါတယ်။ တကယ်က Fashion အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ပြုလုပ်တဲ့ Miss ID မှာတောင် Non-Human ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ပုံမှန်ကနေ ထူးထူးခြားခြားကွဲထွက်နေတဲ့ ဖန်တီးမှု တစ်ခုမို့ ဆန်းသစ်တာတော့အမှန်ပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အရုပ်မလေးကို ပေါင်းစပ်ထားတာမို့ သူမကိုကြည့်လိုက်တိုင်း အိပ်မက်မက်နေသလို ခံစားရစေပါတယ်။ Lulu က ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့ ခုထိဘယ်သူမှ မသိသေးပါဘူး။ အချို့ကတော့ Psychopath ဆန်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောကြသလို တချို့ကြတော့လည်း Lulu ကို Kawaii ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူကောဘယ်လိုမြင်လဲ?
ရက်ရက်စက်စက်လှရက်နိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံတကာက Transwoman (၁၃) ယောက်
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ LGBTQ ဆိုတဲ့ Community ကို အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လက်ခံလာကြပြီး အားပေးလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက Fashion Brand တွေ၊ Beauty Brand တွေဆိုလည်း ဒီ အဖွဲ့အစည်းကသူတွေကို လက်တွဲခေါ်ပြီး နေရာပေးလာကြပါတယ်။ ဒီထဲကမှ Trans တွေဆိုလည်း မွေးရာပါ လိင်အင်္ဂါကို ပြောင်းလဲပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နာမည်ကြီးပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို လှတဲ့ Transwoman တွေကလည်း အများကြီးမို့ အားကျလို့ရအောင် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ရက်ရက်စက်စက်ကိုလှပြီး နူးညံ့တဲ့သူတွေမို့ သူ့တို့ကလည်း အမျိူးသမီးတွေပဲဆိုတာကို ခံစားရမှာပါ။
၂၀၁၉ ထဲက နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး Model မလေးဖြစ်ပါတယ်။ Victoria’s Secret ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Trans Model တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ L’Oreal ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်သလို နာမည်ကြီး Fashion Magazine တွေရဲ့ Cover Star အဖြစ်လည်း ဖော်ပြခွင့်ရသူပါ။ တော်တော်လေးကိုလှတာနော်။
2. Theodora 'Teddy' Quinlivan
အမိုက်စား မျက်နှာကျ၊ မျက်နှာထားနဲ့ Chanel Beauty ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Trans Model အဖြစ် Trans သမိုင်းအတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူလေးပါ။ လိင်မပြောင်းလဲခင်မှာပဲ မော်ဒယ်အဖြစ် လှုပ်ရှားနေခဲ့သလို ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလမှာတော့ လိင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြောငြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
HBO ရဲ့ နာမည်ကြီး စီးရီးဖြစ်တဲ့ Euphoria မှာ ဇာတ်ဆောင်နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားသလို မော်ဒယ်အနေနဲ့လည်း လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ အထာကျကျဝတ်တတ်ပြီး Baby Face လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူမို့ အနုပညာလောကမှာ နာမည်ရလာသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
အရပ် ၆ပေ၁လက်မ ရှိတဲ့ သြစီသူလေးပါ။ Trans Woman အဖြစ် အတိအလင်းမထွက်လာခင်မှာပဲ ကမ္ဘာပထမဆုံးဒွိလင် မော်ဒယ်အဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၁၇နှစ်ထဲက မော်ဒယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတာပါ။
5. Gigi Gorgeous
နာမည်ကြီး Canadian Youtuber ဖြစ်တဲ့ Gigi Gorgeous က Barbie ရုပ်လေးနဲ့ တော်တော့်ကို တူတာပါ။ ဒီလို မျက်နှာပိုင်ဆိုင်ဖို့ Plastics Surgery လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်လေးကိုလှတာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ Getty Family ရဲ့ အမွေဆက်ခံသူ Nats Getty ဆိုတဲ့ အမျိူးသမီးနဲ့ လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Lesbian တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Youtuber, Makeup Artist ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Vlog တွေကိုလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ body ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မိန်းကလေးအစစ်လို့ ထင်ကြတဲ့သူကြီးပါ။ လူတွေကို လိုက်မေးထားတဲ့ Video လေးလဲ Youtube မှာရှိတယ်နော်။ Beauty Line ဖြစ်တဲ့ Dragun Beauty ကိုလည်း တည်ထောင်ထားသူပါ။
7. Jenna Talackova
ကနေဒီယန်သူလေး Jenna က Miss Universe Canada မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို ချောမောလှပလွန်းလို့ Trans မှန်းတောင် သတိထားမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာလည်း Top 12 ထိရောက်ခဲ့ပြီးမှ Trans Woman ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာ ဖြုတ်ချခြင်းခံရတာပါ။ အသက်ဆယ့်လေးနှစ်ထဲက လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
8. Kayo Satoh
ဂျပန်မလေး Kayo ကလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေ စွဲလန်းရတဲ့ အလှပိုင်ရှင်ပါ။ မော်ဒယ်နဲ့ TV Personality တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Blog တစ်ခုမှာ ယောကျာၤးလေးအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြေငြာပြီးနောက်မှာတော့ Fan တွေအားလုံး တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
9. Treechada Poyd Petcharat
နှစ်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း Poyd ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံး Transwoman အဖြစ်ရပ်တည်နေမှာ အသေအချာပါ။ Thai နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေသူပါ။
10. Chananchida Blossom
ကိုးရီးယားမလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Blossom က Face Thailand Season3ရဲ့ Contestant တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Top Three ထဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကို အများအပြားရရှိခဲ့တဲ့သူလေးပါ။ Fashion ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးအထာကျတဲ့သူဖြစ်ပြီး ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်လောက်အောင် လှတဲ့သူပါ။
11. Nathachat Hana
အညိုစင်လေးတွေသဘောကျတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူကို တော်တော်လေးကြွေမှာပါ။ Super Model အချိုးအစစ်နဲ့ အမိုက်စားအသွင်အပြင်ကြောင့် လူကြိုက်များလာတာဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုတော်တော်ရှိတဲ့ သူပါ။
12. Rinrada Yoshi
ကပြားရုပ်လေးနဲ့ သူမက Social Media မှာ အရုပ်မလေးနဲ့တူတယ် ဆိုပြီး နာမည်ကြီးသူလေးပါ။ အသက်၂၃နှစ်သာရှိသေးပြီး အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ Editor ကတော့ သူမျက်နှာလေးကို သိပ်ချစ်တာပဲ။ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
13. Monthana Jeen
ဒီ Trans မလေးကလည်း သဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနေပြန်ရော။ ၂၀၁၇ တုန်းက စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက် မိန်းကလေးဆန်ပြီး ချောမောတဲ့ရုပ်ရှင်သွင်ပြင်ကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
K Drama ထဲက အထာကျကျ အချေမမများ
တကယ် အထာကျလွန်းတဲ့ ကာရိုက်တာတွေပါ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားရဲ့ ဆွဲဆောင်မှူဆိုတာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်သာမက ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ဆောင်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဖက်ရှင်တွေကလည်း အများကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကိုရီးယားဇာတ်ကားအများစုမှာ ခပ်ချေချေ ခပ်မိုက်မိုက်စတိုင်လ် နဲ့ Badass ဆန်ဆန် လုပ်ချင်ရာကိုဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက်ပဲလုပ်တတ်တဲ့ ဇာတ်ကွက်မျိုးကိုအရင်က ယောက်ျားလေးဇာတ်ရုပ်တွေမှာသာ အဓိကတွေ့ရပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိန်းကလေးဇာတ်ကောင်တွေကိုပါ အဲဒီလိုဇာတ်ကွက်မျိုးနဲ့ ဖန်တီးဆန်းသစ်လာကြတာတွေ့လာရပါတယ်။ဒါဟာ မတူတဲ့ရသတစ်မျိုးကို ပေးစွမ်းသလို ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နောက်ထပ် လှည့်စားမှူတစ်မျိုးလို့လည်းဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရှားရှားပါးပါး အဲဒီလိုကာရိုက်တာနဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်တွေထဲကမှ ပရိသတ်တွေအချစ်ကိုအများကြီးသိမ်းယူသွားတဲ့ ပရိသတ်အကြိုက် ခပ်မိုက်မိုက် Badass Queen တချို့ကို စုစည်းဖော်‌ပြပေးချင်ပါတယ် ။
IU (Hotel Del Luna)
ဇာတ်လမ်းအရရော ထူးခြားတဲ့ ကာရိုက်တာအရပါ ပရိသတ်တွေကို ထိထိမိမိ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အလန်းစားဖက်ရှင်တွေနဲ့ စိတ်ထင်တိုင်းကြဲတတ်တဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ကျိန်စာသင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးနေရာမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ IU ကိုမသိတဲ့သူသိပ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဂျို‌ဆွန်းခေတ်ကစလို့ ဒီဘက်ရာစုအထိ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေအပြင် သူမရဲ့ ခပ်ချေချေခပ်မိုက်မိုက်အမူအရာတွေကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကြည့်ရှူသူပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို တော်တော်လေး ဖမ်းဆုပ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။
Kim Dami (Itaewon Class)
မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့မှအရေးမစိုက်တတ်သလို သတ္တိရှိတဲ့ဇတ်ဇတ်ကြဲမလေးတစ်ဦးနေရာကနေ ခပ်မိုက်မိုက်သရုပ်ဆောင်ပြသွားတဲ့ Jo Yi Seo ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်း အားလုံးမှတ်မိကြမှာပါ။ လူငယ်ဆန်ဆန် ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင်တွေနဲ့ တစ်၀က်‌ဆိုးထားတဲ့ ခပ်တိုတိုဆံပင်ပုံစံက ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေး လူပြောများခဲ့ပြီး သူမရဲ့ထီမထင်တဲ့အမူအရာတွေနဲ့ သူမရဲ့ဖက်ရှင်ကအတော်လေးလိုက်ဖက်မှူရှိနေတယ်လို့လည်း အားလုံးက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
Seo Ye Ji( it's okay not to be okay)
မင်းသားကိုသဘောကျလို့၀င်ကြည့်ဖြစ်ရင်း မင်းသမီးကိုအရမ်းကြွေသွားမိကြပါတယ်လို့ လူတကာကပြောစမှတ်ပြုရလောက်အောင် အရမ်းမိုက်ပြီး မြင်ရခဲတဲ့ကာရိုက်တာတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသရုပ်ဆောင်ပြသွားတဲ့ Seo Ye Ji ကို It's okay not to be okay ဆိုတဲ့ on going ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အရင်နဲ့လုံး၀မတူတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့တွေ့ရမှာအသေအချာပါ။အထာကျကျရူးမိုက်မိုက် စကားလုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ကိုဖမ်းစား‌နိုင်တဲ့အပြင် သူမရဲ့ လှပမှူကိုပိုတောက်ပအောင် ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေက ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိကအသက်လို့ဆိုရမလားပါပဲ။
Yoon Seri (Crash Landing On You)
လူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Crash Landing On You မှာ သူများနယ်မြေမှာ သမင်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်နယ်ထဲမှာ ကျားတစ်ကောင်ဆိုတဲ့ အထာကျကျဇာတ်ရုပ်ကို အပိုင်နိုင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြသွားခဲ့တာ တွေ့ရမှာပါ။ဖက်ရှင်ကတော့ တောင်မှာပဲနေနေ မြောက်ဘက်ပဲရောက်ရောက် လျော့မသွားတဲ့အပြင် အတွဲအစပ်ထိမိမှူ Classic ဆန်ဆန်နဲ့ သပ်ရပ်ကျော့ရှင်းနေမှူတွေက သူမကို အကောင်းဆုံးဇာတ်ရုပ်နေရာမှာ တည်ရှိနေစေခဲ့တယ်ဆိုရမလားပါပဲ။
Im Soo Hyang (Graceful Family)
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဖြုန်းမကုန်သုံးမကုန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှူတွေနဲ့ High end ဖက်ရှင်တွေကို ထည်လဲ၀တ်ပြသွားခဲ့တဲ့ Mo Seok Hee ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကလည်း ပရိသတ်အကြိုက် အထာကျကျကာရိုက်တာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမမိခင်သေဆုံးမှူအပေါ် ဖော်ထုတ်ရာမှာ မသမာမှူတွေကြားက ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့မိထွေးရဲ့ ငါးအသုဘကိုတက်လာတဲ့ အခန်းမှာ ထီမထင်ဟန်နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့ဖက်ရှင်နဲ့မျက်နှာပေးတွေက အရမ်းကိုပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Subscribe လုပ်ထားသင့်တဲ့ Thrifting Fashion Youtuber များ
Budget နည်းနည်နဲ့ ဘယ်လို Fashion ကျလို့ရလဲဆိုတာပြောပြထားတယ်
ဖက်ရှင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ခေတ်စားလာသမျှ Fashion တွေ၊ Trend တွေကို အမြဲခေတ်မီနေအောင် Up-to-Date လုပ်ရတာလည်း မဖြစ်မနေလိုပဲနော်။ Influencer လေးတွေ၊ Fashion Junkie လေးတွေဆိုရင်ပို ဆိုးတာတော့။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြောင်းလဲ နေတဲ့ Fashion တွေနောက်ကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း ဈေးကြီးတဲ့ Branded အဝတ်အထည်တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေကို အမြဲ ဝယ်နေဖို့ဆိုတာလည်း အဆင်မပြေဘူးလေ။
အဲ့တော့ Fashion Junkie တွေအတွက် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အများကြီးဝယ်လို့ရတဲ့ Thrifting တွေက ရွေးလို့ကောင်းတဲ့ Option တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင်လည်း Look တစ်ခု၊ Outfit တစ်ထည်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြီဆိုရင် ထပ်ပြီး မဝတ်ချင်ကြတော့ဘူး။ အဲ့တော့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Affordable ဖြစ်တဲ့ Thrift Shopping (ဘေထုပ် Shopping) က ဖက်ရှင်ကျစေတဲ့ အချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
တကယ်တော့ Thrifting နဲ့ Styling လုပ်တာက ကိုယ်ရွေးတတ်ရင်ရွေးတတ်သလောက် Fashion ပစ္စည်းကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ့် Own Personal Look ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးကြည့်လို့ရတယ်။ အကယ်၍ Thrift Fashion အတွက် Style Inspiration တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမိုက်စား Thrifting Focused Fashion Youtuber တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။ ဈေးအများကြီးပေးမဝယ်ပဲလည်း ဘယ်လို မိုက်အောင်ဝတ်လို့ရလဲသူတို့ကိုသာ ကြည့်လိုက်တော့။
အမိုက်စား Street Fashion တွေ Look Book တွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Cassie နဲ့ Ricci တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ToThe9s Youtube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။ Thrift ဖက်ရှင်တွေအပြင် အမိုက်စား Fashion Vlog တွေကို တစ်ဝကြီးကြည့်ရှုရမှာပါ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Korean-American Youtuber လေး JennIm ကလည်း သူ့ရဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန်အထာကျတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေကြောင့်လူကြိုက်များပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Branded တွေထက် Thrifting Video လေးတွေက အရမ်း Popular ဖြစ်ပါတယ်။
Retro နဲ့ Vintage ဆန်ဆန် Fashion Vibe လေးတွေကို အလှဆုံးဖြစ်အောင်ဝတ်ပြနိုင်တဲ့ Ashley Aka ကလည်း Thirfting တွေကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ Youtuber လေးပါ။ သူ့ရဲ့ Vlog တွေမှာလည်း Thrifting Fashion တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
Sporty ဖြစ်တဲ့ Athleisure Style နဲ့ Youtuber ကိုရှာနေတဲ့ဆိုရင်တော့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Beauty Influencer လေး Haley ကိုအခုပဲသွား Subscribe လုပ်လိုက်ပါ။ Harley's Corner ကနေ Traditional Fashion Video တွေရော၊ Vlog-Style Content တွေကိုရော ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
Early-2000s Fashion နဲ့ Trendy Girl Style လေးတွေကို စတိုင်အကျဆုံးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းအောင်တင်ဆက်နိုင်တဲ့ Channel လေးပါ။ Everyday မှာပါ Thrifting ဖက်ရှင်တွေကို ဘယ်လိုတွဲဖက်လို့ရလဲဆိုတာ ကို Sarah က Vlog တွေ၊ Lookbook တွေ၊ Thrifting Haul တွေရောပါအစုံအလင် တင်ဆက်ထားတာပါ။
Rachspeed ရဲ့ Youtuber လေး Rachel ကတော့ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်တွေအပြင် Daily Lifestyle နဲ့ Beauty အကြောင်းအရာ Vlog တွေလည်းပါပါတယ်။ Rachel ရဲ့ Fashion Sense ကကျ Classy၊ Off-Duty-Model ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး Neutral ကာလာတွေ၊ Simple Silhouette တွေကို နှစ်သက်သူပါ။
အမိုက်စား Styling Tips တွေ၊ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Shopping လုပ်လို့ရမယ့် Tips တွေနဲ့ Thrift Styling တွေစုံစုံလင်လင်ရှိတာကတော့ Alexis Sunshine ပါ။
Thrifting တွေကို အမျိုးအစားတွေပါခွဲပြီး တွေ့ရမယ့် Youtuber Macy Eleni ပါ။ Thrifting Challenge တွေ၊ Thrifting Hauls တွေနဲ့ Sales Thrifting တွေကို ပါစုံစုံလင်လင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစု ဝတ်လေ့မရှိတဲ့ Outfit တွေကို လည်း Creative ဆန်ဆန်တွဲဖက်ပြီး ဝတ်ပြထားတဲ့ Fashion Tips လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အထာကျကျ Streetstyle တွေ၊ Outgoing/Fun ဖြစ်တဲ့ Video Content တွေကိုမှကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Melissa Tatti ရဲ့ Threadobssessed Chanel ကကွက်တိပဲ။ Melissa က Extra ဖြစ်တဲ့၊ Bold ဖြစ်တဲ့ Outfit တွေကိုအဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ရမှာ လုံးဝလက်မတွန့်သလို သူ့ရဲ့ Thrifting ဝယ်ထားတဲ့ Outfit တွေကိုလည်း Resale Website တွေမှာပြန်လည်ရောင်းချပါတယ်။
Polished၊ Minimalist နဲ့ Sense of Style အပြည့်ရှိတဲ့ Thrifting Video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Fashion School Graduate ဖြစ်တဲ့ Letitia ရဲ့ Letitia Kiu Youtube Channel က သင့်တော်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Hauls၊ Lookbook နဲ့ Vlog တွေက Informative လည်းဖြစ်သလို Entertaining လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Vancouver က Vietnamese-American Youtuber လေး Nina Huynh ရဲ့ Style ကတော့ Colorful ဖြစ်တဲ့ Style လေးတွေကိုအသားပေးထားပါတယ်။ သူမရဲ့ Channel မှာတော့ အမိုက်စား Thrifting Haul တွေအပါအဝင် သူ့ရဲ့ Taste အတိုင်း Vibrant ဖြစ်တဲ့ Funky ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ Vlog လေးတွေ၊ Lifestyle Video လေးတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ်။
အကြိမ်ကြိမ်လဲကျပေမယ့်လည်း ဇွဲမလျော့ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ၈ယောက်
လူတိုင်းက ကျရှုံးမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျကြတယ်၊ ဝမ်းနည်းရတယ်။ ဒီလိုပဲ ဒီရှုံးနိမ့်မှုတွေကပဲ သင့်ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် တွန်းအားတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မသိတဲ့မရှိအောင် နာမည်ကြီးတဲ့ ပုဂိုလ်အချို့ကလည်း ဒီလိုရှုံးနိမ့်မှုတွေကနေ ရုန်းထွက်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူတွေပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကံကြမ္မာအပေါ် အပြစ်ဖို့နေမယ့်အစား အရှုံးတွေကနေ ဘယ်လိုလဲထနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမှာပါ။
ကဲ မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး ခြေလှမ်းအသစ်တွေလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အထင်ကရနာမည်ကြီးသူအချိူ့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး သင်ယူလေ့လာနိုင်ကြပါစေနော်။
လူကြီး၊ လူငယ်မရွေးနှစ်သက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကာတွန်းကားတွေဖန်တီးတဲ့ Walt Disney ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဘူးနော်။ Animator, Voice Actor နဲ့ Film Producer လုပ်တဲ့ Walter Elias Disney က ဝန်ထမ်းဘဝတုန်းက အလုပ်ထုတ်ရတဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ အထက်အရာရှိက Idea မကောင်းဘူး၊ စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီး ထုတ်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မအောင်မြင်တဲ့အပြင် ဒေဝါလီပါခံရတဲ့အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် မရှုံးမပေးပဲ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် သူဖန်တီးလိုက်တဲ့ Mickey and Minnie Mouse က Animation အတွက် ဆု၃၂ ခုရရှိခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ဖန်တီးသမျှ Animation Movie တွေက ငွေဝင်သောက်သောက်လဲရပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ခုလူတိုင်း မရှိမဖြစ်သုံးနေရတဲ့ Microsoft Work တွေ Excel တွေက Bill Gate ရဲ့ တီထွင်မှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ Bill Gates နဲ့ Paul Allen တို့ပူးပေါင်းပြီး တည်ထောင်ထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အရှုံးတွေပေါ်ပြီး ဒုက္ခတွေရောက်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Computer တီထွင်မှုကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ Bill Gate အတွက် ဒီအရာက လက်ရှိအချိန်ထိ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး Software Company ဖြစ်နေတဲ့ Microsoft ကို မွေးဖွားအသက်သွင်းဖို့ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၁နှစ်အရွယ်မှာ ကမ္ဘာ့အငယ်ဆုံး Self-Made Businessman ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Bollywood မင်းသား အမီနာဘချန်းက Indian လူမျိူးတွေကော၊ အနုပညာရှင်တွေပါ အားကျအတုယူရတဲ့မင်းသားကြီးပေါ့။ သရုပ်ဆောင်မလုပ်ခင်တုန်းက Radio တွေမှာ Show Host လုပ်ဖို့ လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Radio Station တော်တော်များများက သူ့ရဲ့အသံကို မကြိုက်လို့ဆိုပြီး အမြဲပယ်ချလေ့ရှိပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အတွက် Audition ဝင်တုန်းကလည်း အရပ်အရပ်ရှည်လို့ဆိုပြီး ငြင်းပယ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ စတင်ရိုက်ကူးရတဲ့အခါမှာလည်း ကားတိုင်းနီးပါးမအောင်မြင်လို့ သူ့အတွက် အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အတိတ်မှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ ဇွဲမလျော့ပဲ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုအချိန်မှာ Bollywood ရဲ့ ပြည်သူ့ချစ်မင်းသားကြီးအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို သူ့ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေကလည်း ဝင်ငွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Company ကတောင် ပြန်ပြီးအလုပ်ထုတ်တာခံရတဲ့ ရှားရှားပါးပါးလူတစ်ယောက်ပါ။ အလုပ်ထုတ်ခံရပေမယ့်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပဲနဲ့ သူ့ရဲ့အလုပ်ထဲကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ဖြေဖျောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၇ မှာ Apple Company ရဲ့ CEO အဖြစ် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ Company က အောင်မြင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူအနေနဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံရတာကို မျှော်လင့်မထားပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်က သူ့ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံ၊ အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာပါလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မိသားစုလိုက် နေအိမ်ကနေ မောင်းထုတ်ခံရတာကြောင့် မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒေါသထွက်လွယ်၊ စနစ်တကျမလုပ်တတ်တဲ့ Abranham Lincoln ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကြောင့် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သူက နိုင်ငံရေးဘက်ကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့ပါတယ်။ Election ၈ခု ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ စီးပွားရေးဘက်ကိုလည်း လုပ်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် Nervous Breakdown ဝေဒနာကိုပါ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအရှုံးများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပေမယ့်လည်း လက်မလျော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အကောင်းဆုံးသမ္မတတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Physicist ပညာရှင် Albert Einstein အကြောင်း စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကို တော်ပြီး ဦးနှောက်အရမ်းကောင်းလို့ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ တွေးမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Einstein က အသက်လေးနှစ်အထိ စကားမပြောနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက်ခုနှစ်နှစ်အထိ စာမဖတ်တတ်ခဲ့ပါဘူး။ အတန်းထဲမှာလည်း စာညံ့တဲ့ကျောင်းသားလိုပဲ သိကြပြီး ကျောင်းကနေပါ ထုတ်ခံရပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာလည်း အတန်းတွေလစ်၊ အမှတ်လည်း မကောင်းလို့ ကျောင်းထွက်ပြီး အသက်အာမခံရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တောင် စဉ်းစားခဲ့တဲ့သူပါ။ ဘွဲ့ရပေမယ့်လည်း ဆရာတွေရဲ့ Recommendation က မကောင်းတဲ့အတွက် အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ နှစ်နှစ်ကြာ ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုအမြဲကျရှုံးနေတဲ့သူက တစ်ကမ္ဘာလုံးက အမြဲလေးစားအားကျရတဲ့ ရုပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကထင်မှာလဲ။
နာမည်ကြီး Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် J.K Rowling ကို စိမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အားပေးတဲ့ Harry Potter စာအုပ်အတွဲလိုက် ရေးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ J.K Rowling က ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေအများကြီး ကြုံခဲ့တယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်မလား။ ငယ်စဉ်ဘဝထဲက မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ဒဏ်ကြောင့် Disorder ရခဲ့ပြီး Oxford University မှာ ကျောင်းတက်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးသွားတဲ့အခါမှာတော့ စိတ်အခြေအနေပြန်လည်ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကို ဖြေဖျောက်ဖို့ Portugal မှာ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှမကြာပါဘူး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရတဲ့အတွက် ကွာရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်ကျရောဂါခံစားခဲ့ရပြီး သတ်သေဖို့အထိပါ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ Harry Potter စာအုပ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခွင့်ရဖို့ Publishing House တွေကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း နာမည်ကြီးစာအုပ်တိုက် ၁၂ တိုက်လုံးက ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာတော့ စာအုပ်တွေကို ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး ရောင်းချရတဲ့ ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
American နာမည်ကြီး Talk Show Host တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Oprah Winfrey က ငယ်ငယ်က ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။ အသက်ခြောက်နှစ်မှာ Wisconsin ဆိုတဲ့မြို့လေးကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီး အမေတူ အဖေကွဲ ညီမလေးနဲ့ နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ သူ့ရဲ့ဦးလေး၊ တစ်ဝမ်းကွဲတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အသိအကျွမ်းတွေဆီက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အသက်၁၃နှစ်မှာတော့ အိမ်က ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး လမ်းမတွေပေါ်မှာလည်း ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ မေမေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာလည်း နည်းစနစ်မမှန်တာကြောင့် ကလေးက မွေးဖွားပြီးချိန်မှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သတင်းကြောငြာသူလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Producer တွေက သူမကို သဘောမကျတဲ့အတွက် ထုတ်ခံခဲ့ရသူပါ။ Oprah Winfrey Show ကို စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုများစွာရခဲ့လို့ Chicago မြို့မှာ အမြင့်ဆုံး Talk Show Host ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ ဘီလီယံနာသူငှေးစာရင်းမှာ ပါဝင်နေပြီး အမျိုးသမီးတိုင်း စံထားအားကျရတဲ့ အမျိူးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
#Famous People Fail
သိထားသင့်တဲ့ ဖက်ရှင်လောကရဲ့ နာမည်ကျော်လူမည်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ
မေလကုန်လောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပမှာ လူမည်းတွေရဲ့ တရားမျှတမှု၊ ညီမျှမှုတွေအတွက် Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ နယ်ပယ်အရပ်ရပ်မှ ကျော်ကြားသူများ ၊အနုပညာရှင်များလည်း အများအပြားပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေက ဟိုးအရင်တည်းက အနည်းနဲ့အများရှိခဲ့တာ ဘာကြောင့် လူမည်းတွေက အရမ်းထက်မြက်ပြီး Genius ဖြစ်တဲ့သူတွေပါ။ ဖက်ရှင်၊ အနုပညာ၊ ဂီတ နဲ့ တခြားပညာရှင်နယ်ပယ်မှာလည်း အောင်မြင်နေကြတဲ့၊ လူသားခြင်းစာနာပြီး ထက်မြက်တဲ့၊ စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး မျှတတဲ့ လူမည်း တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အလားတူပဲ ကျွန်မတို့ အမြဲအဆက်မပြတ်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဖက်ရှင် Industry ကြီးမှာလည်း နာမည်ကျော် Fashion Brand ကြီးတွေကို ပဲ့ကိုင်နေတဲ့ အရမ်း Smart ဖြစ်တဲ့ လူမည်းဒီဇိုင်နာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သင်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့ကိုတော့ အခုတွေ့လိုက်တော့မှ သြော်.. သူကဒီ Fashion Brand ရဲ့ Designer ပါလား၊ Creative Director ပါလားဆိုပြီးသင့်ကို အံ့အားသင့်စေမှာ သေချာပါတယ်။
ကဲ ဒါဆို သင်သိထားသင်တဲ့ အမိုက်စား လူမည်း ဒီဇိုင်နာတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ…
Virgil Abloh: Off-White / Louis Vuitton Menswear
Virgil ကိုတော့ Hypebeast လေးတွေတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက အမိုက်စား Streetstyle Brand “ Off-White” ရဲ့ Chief Executive Officer(CEO) ဖြစ်သလို Louis Vuitton’s men’s wear collection တွေရဲ့ Artistic Director တစ်ဦးလည်း ဖြစ်လို့ပါ။ မူလက Architect တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Virgil က ၂၀၁၀ မှာ Kanye West နဲ့ Collaborate လုပ်ခဲ့ပြီး Kanye ရဲ့ Official Creative Consultant အဖြစ် စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ Youth Street Culture တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Label ဖြစ်တဲ့ Off-White ကို၂၀၁၃ မှာစတင် Launch လုပ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ High Fashion Runway ရဲ့ထိပ်တန်း Brand တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ Virgil ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေက Louis Vuittion ရဲ့ Menswear Collection တွေကိုပါ တောက်ပြောင်သွားစေပါတယ်။
American Fashion Designer ဖြစ်တဲ့ Tracy Reese က Council of Fashion Designers of America ရဲ့ Board Member တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Own Label နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Plenty နဲ့ Frock ကိုဦးစီးနေပါတယ်။ သူမရဲ့ Collection တွေက Modern Women တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်သလို သူမရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေတော်တော်များများက Feminine ဖြစ်ပြီး Retro-Influenced Style တွေကိုအသားပေးထားပါတယ်။ Tracy Reese Black Label ကိုလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ Launch လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Former First Lady Michelle Obama က Tracy ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို အရမ်းနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး Tracy ရဲ့ Dress တွေနဲ့ မကြာခဏမြင်တွေ့ရမှာပါ။
Kerby Jean-Raymond: Pyer Moss
အသက် ၁၅ နှစ်လောက်တည်းက Kerby က ဒီ Fashion Industry ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ Kerby က Kay Unger၊ Marchesa၊ Marc Jacobs နဲ့ Theory တို့မှာလည်း Designer အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Fashion Line “Pyer Moss” ကို ၂၀၁၅ မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာလည်း CFDA/Vogue Fashion Fund Award ကို ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
Kerbey က သူ့ရဲ့ Brand ကို Art Projet တွေလို့ သဘောထားလေ့ရှိပြီး သူ့ရဲ့ Collection တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Storytelling တွေနဲ့ Social/Political အမြင်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ လူမည်းတွေရဲ့ Rights အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့ ဖက်ရှင်အငွေ့အသက်တွေလည်း လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။
Olivier Rousteing: Balmain
နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Balmain ကို သိတယ်ဆိုရင်တော့ Olivier Rousteing ကိုလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နာမည်ကျော် မမတွေဖြစ်တဲ့ Kardashian ညီအစ်မတွေ၊ Supermodel တွေရဲ့ အသည်းစွဲ Designer တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ American Icons တွေဖြစ်တဲ့ Beyonce၊ Kim Kardashian တို့နဲ့လည်း Collaborations/ Partnership တွေ အများကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Balmain Label ကတော့ Pop Culture နဲ့ Luxry Fashion ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင် Pieces တွေဖြစ်ပြီး မြင်ရသူတိုင်းကို ဒါက Balmain ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ Edgy Vibe ဖြစ်ပါတယ်။
New York Based Designer Carly Chushnie က Luxry Brand ဖြစ်တဲ့ Cushie et Ochs ကို ဆယ်စုနှစ်နီးပါး ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ Collection တွေက Feminine၊ Body Concious and Minimalist ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကြောင့် လူသိများပါတယ်။ Carley ရဲ့ First Solo Show Spring 2019 မှာဆိုရင် Caribbean Roots and Muse အငွေ့အသက်တွေပါတဲ့ Tropical ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်တွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကို Successful Black Women in Designer Fashion လို့တောင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး Carly ကလည်း သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Imagination တွေကို ထုတ်ပြဖို့ ဘယ်တော့မှ လက်မတွန့်တဲ့သူပါ။
Hatian-Italian လူမျိုး Designer Stella Jean ကတော့ Interiew တစ်ခုမှာ သူမရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက “fundamental ပုံမှန်တွေထဲကနေ Multicultural concept ဖြစ်တဲ့ အရာတွေ” လို့ ဖွင့်ဟထားပါတယ်။ Italian သွေးနှောသူမို့ Italian ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ လူမျိုးကွဲ Cultural တွေရောယှက်နေတဲ့ အဆင်ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Bold Color Prints တွေ၊ အရောင်အဆန်တွဲစပ်မှုတွေ နဲ့ Pattern Mixing တွေကိုလည်း အများကြီး တွေ့ရမှာပါ။ သူမရဲ့ Runway Collection တွေကိုကြည့်ရင်လည်း ဥရောပနဲ့ Exotic ဖြစ်တဲ့အရာတွေရဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
Maxwell Osborne: Public School
Maxwell က New-York based Label “Public School” ရဲ့ တည်ထောင်သူနှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူရဲ့ Business Partner, Dao-Yi Chow တို့ဟာ Public School ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ CFDA/Vogue Fashion Fund နဲ့ Woolmark Prize ကနေလည်း ဆုတွေအများကြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Maxwell တို့ရဲ့ Fashion တွေက “ Urban Fashion” ကို အခြေခံထားပေမယ့် သူက သူတို့ရဲ့ Fashion Line က Streetwear ကိုကိုယ်စားမပြုဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Youth Fashion Label ဖြစ်တာမို့ လူငယ်တွေရဲ့ စကားသံတွေကိုထုတ်ဖော်ဖို့လည်းဝန်မလေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ “Make America New York Again” slogan ပါတဲ့ Baseball Cap က Fashion Week မှာ Hot အဖြစ်ဆုံး Accessory ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Product Line ကို New York မှာပဲအများဆုံးထုတ်လုပ်ပြီး Local Tailor တွေ၊ Pattern Maker တွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။
Fellisha Noel: Fe Noel
Fellisha က လွန်ခဲ့တဲ့ 8 နှစ်လောက်တည်းက သူမရဲ့ Own Label “Fe Noel” ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Fashion Taste တွေက Sensual၊ Glamorous ဖြစ်ပြီး Collection အများစုကို Brooklyn မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Fe Noel Collection တွေကို Harlem’s Fashion Show 2018 နဲ့ တခြား Runway တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် လူမည်း Creative တွေရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့စွမ်းရည်တွေကို အားလုံးက သဘောကျနှစ်သက်လာကြတယ်။ Spring 2019 မှာလည်း Afro-Cuban ပန်းချီပညာရှင် Harmonia Rosales နဲ့ ပူပေါင်းပြီး Fashion Creation တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲ့ Collaboration မှာလည်း Black Woman တွေကို Highlight လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Shayne Oliver: Hood By Air (hba)
Hyped Fashion တွေကိုနှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ Hood By Air(hba) ကိုတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ၂၀၀၆ မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ High Fashion Streetwear Brand ရဲ့ Designer Shane Olivier ကလည်း အတော်ဆုံး Black Fashion Designer ထဲမှာတစ်ဦးအပါအဝင်ပါ။ သူ့ရဲ့ hba က gender-neutral ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပြီး “Powerwear” တွေလို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ နာမည်ကျော် Artist တွေဖြစ်တဲ့ A$AP Rocky၊ Kanye West၊ Rihanna တို့နဲ့လည်း Collaboration တွေ၊ Capsule Collection တွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Streetwear တွေကို Luxry High Fashion ထိရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လာနိုင်တဲ့ Olivier ရဲ့ အရည်အချင်းကတော့ တကယ်လေးစားစရာပါပဲ။
#Black Fashion Designers
လူတွေမုန်းတီးလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား Villain များ
ကိုးရီးယားကား စွဲနေတဲ့သူတွေရှိလား၊ အပိုင်းတစ်ပိုင်းလေး စကြည့်မိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မျက်တွင်းကျ၊ ညနက်တဲ့အထိ စွဲကုန်ကြတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ကို ကိုင်လုပ်လိုက်ချင်တဲ့ Villain တွေက လည်း ဇာတ်ကားကို အများကြီး ပံ့ပိုးပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ပိုင်းနဲ့ တစ်ပိုင်းမရိုးရအောင် ကြည့်ရှုသူကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ ကိုးရီးယားကားတွေရဲ့ အားသာချက်လို့တောင် ပြောရမလားပဲနော်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် Villain တွေကတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ မုန်းခြင်းကို အပြင်းအထန်ခံရလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်လွန်းတဲ့သူတွေမို့ ကိုယ့်စိတ်ကို မယိုးမရွဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သူများ ပါနေမလား ကြည့်လိုက်နော်။
Lee Dong Wook (Seo Moon Zo)
Lee Dong Wook ကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသဲကျော်ဦးဦးပေါ့။ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားဆိုတဲ့အတိုင်း အမြဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသူကြီးကနေ ဒီကားမှာတော့ ဘယ်လိုမုန်းစရာကောင်းမှန်းမသိအောင်ကို မုန်းလိုက်ရတာ။ ဒီ Character က နည်းနည်းလည်း ကြောက်စရာကောင်းတာမို့ ပုံမှန်ထက် ခွဲထွက်တဲ့ Lee Dong Wook ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပရိတ်သတ်တွေက မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ပါဘူး။
Han So Hee (Yeo Da Kyung)
ငယ်ရွယ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကျောင်းသူမလေးနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီး Han So Hee က ဒီနှစ်ရဲ့ မုန်းစရာအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကောင်ထဲက တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးက အတော်လေးချော၊ အတော်လေးလှနေပေမယ့်လည်း သူများအိမ်ထောင်ကို ဖျက်စီးတဲ့ သူမရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မေတ္တာပွားခြင်းကို ခံရသူလေးပါ။
Ahn Bo Hyung (Jang Geun Won)
ကျောင်းတက်ကတည်းက ကတုံးလေးကို မျိူးစုံဒုက္ခပေးလို့ စိတ်တိုလိုက်ရတာအမောနော်။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ သားအကြီးအဖြစ် အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Main Actor Park Seo Joon နဲ့ သူရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ရုပ်ရှင်ကလို မဟုတ်ပဲ အပြင်မှာ ကောင်းမွန်ကြောင်းကို ရှင်းပြရလောက်အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kim Seo Hyung (Shin Aeri)
2008, 2009 လောက်တုန်းက TV ကနေ အမြဲစောင့်ကြည့်ရတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ။ SBS ရုပ်သံလိုင်းက လွှတ်တဲ့ လူကြည့်အများဆုံး Drama Series တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Shin Aeri ရဲ့ ဇာတ်ကောင်က ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးဝါးမုန်းတီးစရာကောင်းလဲဆို အပြင်ဘဝမှာ သူမအတွက် ခြောက်လှန့်စရာကောင်းနေတုန်းပါပဲ။
Lee Yoo Ri (Yeon Min Jung)
Villain ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စွယ်စုံရ မင်းသမီး Lee Yoo Ri ကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ခေတ်မစားခင်ကတည်းက လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အမေနဲ့ သမီးကို စွန့်လွှတ်ပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ မိန်းမနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတာ သိပ်ကို ပီပြင်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။
Go Hyun Jung (Lady Mishil)
ဒီနန်းတွင်းကားလေးကို တော်တော်များများမှတ်မိကြမှာပါ။ အာဏာမက်ပြီး ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များတဲ့ မိဖုရားကြီးနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒီဇာတ်ကောင်ကြောင့် လူမုန်းများခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် သူမအတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
Kim Ji Won (Rachel Yoo)
ဒီကားထဲမှာ အမုန်းခံရဆုံးသူဆိုရင် Kim Ji Won ကိုပြရမှာပါ။ ခပ်စွာစွာ၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်း Rich Kid နေရာကသရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသားကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကို မျိုးစုံဒုက္ခပေးပြီး ကွဲကွဲအောင် လုပ်တဲ့ Character ပါ။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ရုပ်နဲ့ မလိုက်အောင် အကျင့်ယုတ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူမို့ Viewer တွေ ပါးထရိုက်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။
Jung Woong In (Min Joon Gook)
ကိုးရီးယားနာမည်ကြီး Villain Actor တွေထဲက အကောင်းဆုံး တစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သူပါတဲ့ကားတွေဆို တော်တော်များများ ကောင်းလို့ အမြဲကြည့်မိတဲ့အထိပါပဲ။ I Can Hear Your Voice ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း သူ့ရဲ့ အကြည့်၊ အပြုံးတွေက ရွံ့မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင် ပီပြင်လွန်းလို့ အချိူ့ဆို သူ့ကို အပြင်မှာ တွေ့တာနဲ့ ရှောင်ဖယ်ပြီး ထွက်ပြေးကြလေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူတို့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ လမ်းကြောင်းအပေါ်ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်မှုရှိကြလဲ။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း MODA ပရိသတ်ကြီးအတွက် MODA မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်နေကြတဲ့ အမျိုးသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအကြောင်းကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MODA ရဲ့ ပုံမှန်ပရိသတ်ကြီးတွေကတော့ သူတို့တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း သူတို့အကြောင်းတွေကို လေ့လာလို့ရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Fashion နဲ့ ပတ်သက်ရင် ယောက်ျားလေး ၊ မိန်းကလေးမခွဲခြားဘဲ အားလုံးဟာ စမတ်ကျကျနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးယူပြီး Fashion ကျကျ နေထိုင်တတ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ခေတ်နဲ့အညီ Fashion ကို ဦးစားပေးလာကြတာနဲ့အမျှ အဝတ်အစားပိုင်းသာမက ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း နောက်ကျမကျန်ရလေအောင် ဆန်းသစ်လာကြပါတယ်။ ဆံပင်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်ပြီး Fashion ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေဟာ ဆံပင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသစ်အသစ်တွေကို ဖန်တီးလာတတ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဆံပင်ကို မကြာခဏပုံစံပြောင်းလဲပြီး ဖန်တီးကြတဲ့အစား Hair Wig တွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရောင်၊ဒီဇိုင်းကို ခေတ်နဲ့အညီ ဖန်တီးလာကြပါတယ်။ Hair Wig တွေ ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆံပင် ပျက်စီးမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်သလို မိမိတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆံပင်ပုံစံကို သွားမယ့်နေရာနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကလည်း Hair Wig ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး Hair Wigs တွေကို ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ မှာယူရောင်းချပေးနေတဲ့ WeShop DivaWigs ရဲ့ CEO ကိုသန့်သူရိန်ပြောပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို အောက်က Link လေးမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်။
ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားသူ။ သမီးလေးကေဘေဘေးရဲ့ ဖေဖေ။ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ခင်ပွန်း။ အောင်မြင်တဲ့ လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး။ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေက ဇနီးနဲ့ သမီးလေးအပေါ် နွေးထွေးမှုအပြည့်………..။ သူပြောပြတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း၊ မိသားစုအကြောင်း၊ အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဖော်ပြထားတဲ့ Link ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်နော်။ လူငယ်မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ MDS အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်မှာ ထိုးဖောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။
Henry Yee ကThe Hive by CFTG ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုံဆွဲရတာဝါသနာပါပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက တောက်လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ Private School တက်ခဲ့ပြီး High School ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စင်ကာပူမှာ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး Bachelor Degree ကို သုံးနှစ် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီဇိုင်းပိုင်းတက်ချင်တာ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိုရောက်တော့ Business Management ကိုပဲ တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေကလည်း Business Management ပဲ တက်စေချင်ပြီး အလုပ်အတွက်လည်း ပိုကောင်းအောင် အကြံပေးတဲ့အတွက် တက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျောင်းပြီးခါနီး Internship ဆင်းတဲ့အခါမှာ ပထမဦးဆုံးစလုပ်ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက Fabric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ထိုကုမ္ပဏီမှာ ခြောက်နှစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ယခုအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ်က Sales & Marketing ကို အခြေခံပြီး လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူ့ရဲ့ပညာရေး ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းနဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Link လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
မှတ်မိဖို့လွယ်တဲ့ အနုပညာအမည်နဲ့ ဏကြီး။
မီရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ တွဲပြောနေကြတဲ့ ဏကြီး။
သူနဲ့ တွေ့ဖို့ ချိန်းပြီးတော့ သူ့ကို ဘယ်လောက်သိထားသလဲလို့ ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။
သူ့ကို ပထမဆုံး ကောင်းကောင်း မှတ်မိသွားတဲ့ကားကတော့ ရဲတိုက်၊ ဂျေမီနဲ့ ဖွေးဖွေးတို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ' ဘယ်က လာလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်ကို သွားမှာလဲ ' ဆိုတဲ့ကား။ သူကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး သူကိုယ်တိုင် ရိုက်တဲ့ကား။ ဇာတ်ညွှန်းလည်း ကောင်းသလို ကြည့်ဖူးတဲ့ မြန်မာကားတွေနဲ့လည်း စိုးစဉ်းမျှ မတူ။ ၂၀၁၁ မှာ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီးကို ဗျူးခွင့်ရတုန်းက ကြားခဲ့ရဖူးသလို ၁၉၆၀ ကတည်းကနေ ခုထိ ထပ်ပြန်တလဲလဲ သရုပ်ဆောင်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေ မပါဘူး။ စကားကို မလိုအပ်ဘဲ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်ပြောနေတာတွေ မပါဘူး။ ပေါတောတော ဟာသဖောက်ကွက်တွေ မပါဘူး။ ပြဇာတ်ဟန်တွေကို မဖျောက်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ မပါဘူး။ လူသုံးယောက် ကားတစ်စီးနဲ့ လိမ့်ချင်ရာ လိမ့်နေပုံက ကြည့်ရသူတွေပါ လိုက်လွင့်ချင်စရာ။
နောက်တစ်ကားကတော့ ရဲတိုက်နဲ့ ဖွေးဖွေးတို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ' ဘိုမ ' ဆိုတဲ့ကား။ ဒီကားထဲမှာ ဖွေးဖွေးဟာ Emotional Coma ဖြစ်နေပြီး ငိုမရ ရယ်မရ၊ ချစ်မရ မုန်းမရနဲ့ ခံစားစိတ်ပျောက်ဆုံးနေသူ။ ရဲတိုက်ကျတော့ ဆေးကျောင်းကနေ ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဆေးကျောင်းသား၊ စိတ်နှစ်ခွရောဂါဖြစ်နေသူ။ သူတို့နှစ်ယောက် ဆုံကြတဲ့အခါ ဖြစ်ပျက်တာတွေကို ကိုဏကြီးက ရိုက်ပြထားတယ်။ ကြည့်ဖူးတဲ့မြန်မာကားတွေထဲကနေ ကွဲထွက်နေတာ သိသာတယ်။
နောက် Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wanted ရဲ့Music Video တွေကို သူရိုက်ပေးထားတာတွေ။ ဝေလရဲ့ ခင်လေးစိမ်းတယ်၊ စိုင်းစိုင်းရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Valentine နဲ့ သီရိဆွေရဲ့ဆိုလာကိုစတာတို့ကို သူ ရိုက်ပေးထားတာတွေ။ မကြာခင်မှာ ရုံတင်တော့မယ့် မီကလည်း ကိုဏကြီးအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေက အများကြီး ရှိနေတာ သတိထားမိတယ်။ မေးစရာ အများကြီးကို စဉ်းစားမိလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ . . . ။
ပရိသတ်ကြီးရော ဒါရိုက်တာ ဏကြီးအကြောင်း ဘယ်လောက်သိထားပါလဲ။ ပရိသတ်သိထားတာထက် ပိုသိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း အောက်က Link လေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်။
U Aung Chit Khin
တစ်ချိန်က တေးသံသွင်းလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာ သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ယင်းမာတေးသံသွင်းကို မိဘတွေဆီကနေ ဆက်ခံခွင့် ရရှိကာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ။ အသက် ၂၆ နှစ်မှာ ပုတက်ဂျာနယ်ကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ကာ ဂျာနယ်သက်တမ်း ၁၂ နှစ် ကျော်လာတဲ့အထိ ဆက်လက်စီမံလုပ်ကိုင်နေသူ။ မိဘတွေက စင်ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတာကို လက်မခံဘဲ မလေးရှားကနေ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လာပြီး Strategy First Institute ကို စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူ။ သူ့ကျောင်းမှာ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တချို့ MLM ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဝန်ဆောင်မှုမပေးပါလို့ ကြေညာထားသူ။ တစ်ပါတ်မှာ ခုနစ်ရက်စလုံး အလုပ်လုပ်နေတတ်သူ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပြေလျော့ဖို့နဲ့ ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားကို နေ့တိုင်း သွားသူ။ အဲဒီလိုဖြတ်သန်းမှုတွေ ရှိခဲ့သူရဲ့နာမည်က ဆရာ ဦးအောင်ချစ်ခင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
#U Aung Chit Khin
Celebrity/Model တွေမဟုတ်ပဲ Cover Star အဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့် London မှ Keyworkers များ
တကယ် လေးစားထိုက်တဲ့ သူရဲ့ကောင်း တွေပါ
၂၀၂၀ က ကျွန်မတို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် မမေ့နိုင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောရမလိုပါပဲ။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။ ကပ်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားတယ်။ Tragic ဖြစ်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ အားလုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်ပြီး ရှင်သန်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီး ကိုလည်း ပြန်လည် ဂရုစိုက်ကြရမယ်။ ဒီထက်ဆိုးရွားတာတွေမဖြစ်လာအောင်လည်း လူသားအားလုံးက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တစ်သားတည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမယ်။
နာမည်ကျော် Vogue Magazine ရဲ့ July Issue ထွက်ရှိလာတဲ့ အခါအရမ်း ကို မင်သက်သွားမိတယ်။ ယခုလ July Cover Star တွေကတော့ တကယ် လေးစားစရာကောင်းတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့သုံးယောက်ကတော့ အရင် Cover Star တွေလို ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ Celebrity လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်း အထာကျပြီး လှပနေတဲ့ Supermodel တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ Influencer တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ သတ္တိတွေ၊ သူတို့ရဲ့ မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကတော့ အရာအားလုံးထက်သာလွန်ပါတယ်။
သူတို့သုံးယောက်ကတော့ အခုလို ကပ်ရောဂါ Pandemic တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ United Kingdom ကအများပြည်သူရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Frontline ကနေ တာဝန်ယူပေးနေတဲ့ Frontliner တွေပါ။
Anisa Omar က King's Cross, London မှာရှိတဲ့ Supermarket တစ်ခုမှာ Supermarket Assistant အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသလို တစ်ဖက်ကလည်း တက္က္ကသိုလ်မှာ Business Management ပညာရပ်ကို သင်ကြားနေသူပါ။ “ကျွန်မရဲ့အလုပ်က ဒီ Pandemic ကြီး မဖြစ်ခင်ကတော့ ဘာမှအဲ့လောက်အရေးမကြီးသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အလုပ်ကို အခုထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရမယ်။ အပြင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေဖြစ်နေ လူတွေ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဈေးဝယ်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ အလုပ်လုပ်ရမယ်။” လို့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Anisa ကဆိုပါတယ်။
Frontliner တွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံး Health Professional တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rachel Miller ကတော့ Covid-19 Outbreak တွေမဖြစ်ခင်တည်းထဲ Homerton Hospital မှာ သားဖွားဆရာဝန်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ Rachel ကိုလည်း သူမရဲ့ Work Shif တွေရှိတဲ့ကြားကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး Photo အတွက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ “ ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ အားပေမှုနဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ကျွန်မတို့ National Health Service ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေအရမ်း ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ပင်ပန်းတာတွေလည်း အလိုလိုပျောက်ကုန်ရော။” လို့ Rachel က Interview မှာပြောပြပါတယ်။
နောက်ထပ် Key Worker တစ်ယောက်ကတော့ Overground Train Driver တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Narguis Horsford ပါ။ Narguis က အများပြည်သူရဲ့ Public Transport အတွက် London Overground ရထားမောင်းသူအဖြစ်လုပ်ကိုင်လာတာ 10 နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သူမကို Feature လုပ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါမှာ အံ့အားသင့်သွားသူပါ။ “အိမ်ကမိသားစုတွေက စိတ်ပူကြပေမယ့် ကျွန်မဒီလို Key Worker အဖြစ်အများပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အတွက် Train Driver အလုပ်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ အားလုံးအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။” လို့လည်း ပြောပြသွားပါတယ်။
အခုလို ကပ်ဘေးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် Frontline ကနေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ Key Worker တွေအားလုံးကို MODA Team မှ အထူးလေးစား ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Photo credit from British Vogue.